अध्ययनहरुले देखाएको छ, काठमाडौंबासीका लागि पर्याप्त अक्सिजन छैन । अर्थात यो उपत्याकामा यति धेरै वायु प्रदूषण छ कि, सास फेर्नका लागि शुद्ध हावा छैन । काठमाडौंमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्र अहिले वायु प्रदूषणको चपेटामा छ ।
शहरवासीहरुको फोक्सोमा शुद्ध हावा पुग्दैन । जबकी स्वस्थ्य जीवनका लागि स्वस्थ्य खानपान जति आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी शुद्ध हावाको आवश्यक छ । शरीरमा पर्याप्त अक्जिन पुगेन भने शरीरभित्र अनेकौ रोगको संक्रमण हुन्छ ।
अक्सिजन निशुल्क प्राप्त हुने त्यस्तो औषधी हो, जो हामी क्षणक्षणमै उपभोग गरिहेका हुन्छौ । यद्यपी शहरवासीका लागि यो अपर्याप्त हुँदैछ । कलकारखाना, गाडी र मानव निर्मित चिजका कारण उत्पन्न प्रदूषणले हाम्रो फोक्सो भरिंदैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले केही काइदा अपनाउन सकिन्छ ।
संभव भएसम्म रुख रोप्नुपर्छ । रुख बिरुवा स्यहार्ने, हुर्काउने काममा हामीले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, सबै अवस्थामा यो अनुकुलता मिल्दैन ।
के गर्ने त ? : हामीकहाँ केहि यस्ता बनस्पती पाइन्छन्, जसले वायुमन्डललाई शुद्धिकरण गर्न सहयोग गर्छ । राम्रो कुरा त के भने, ति वनस्पती हाम्रो भूगोलमा पाइन्छ । घर, बगैंचामा त्यसलाई रोप्न र हुर्काउन सकिन्छ । घर आँगन, बगैंचा, बार्दली वा गमलामा ति वनस्पती रोप्न सकिन्छ । के हुन् यी वनस्पती ?
चमेली : चमेलीको फूल आफैमा सुन्दर हुन्छ । विभिन्न सजावटको सामग्रीमा यसको प्रयोग हुन्छ । चमेली सानो बुट्यान हो, जो घर बगैंचामा लगाउन सकिन्छ । भनिन्छ, चमेलीले वायुमन्डल शुद्धिकरणमा पनि भूमिका खेल्छ । साथै यसले सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्छ ।
घिउकुमारी : घिउकुमारी अति उपयोग वनस्पति हो । औषधिय गुणको घिउकुमारी आर्युवेदमा पनि प्रयोग हुन्छ । यो स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राम्रो कुरा त के भने, घिउकुमारी घर, बगैंचामा सजिलै लगाउन सकिन्छ । भनिन्छ, घिउकुमारीले रातको समयमा अक्जिन प्रवाह गर्छ । यसले गर्दा हाम्रो आसपासमा घिउकुमारी छ भने, त्यसले स्वास्थ्यमा निकै राम्रो प्रभाव पार्छ ।
तुलसी : तुलसीलाई त हामी पूज्छौ । यो वनस्पती अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानिन्छ । आर्युवेदमा तुलसीको खास महत्व छ । यो परम्परागत औषधी हो । बच्चादेखि बृद्धबृद्धका लागि यसले औषधीको कामा गर्छ । बहुउपयोगी तुलसीले पर्यावरणलाई पनि शुद्ध बनाउने बताइन्छ ।
पुदिना : पुदिना, जसको स्वाद मिठो हुन्छ, वास्ना पनि । यसलाई हामी सलाददेखि अचारसम्ममा प्रयोग गर्न सक्छौं । पुदिना खासगरी पेटको समस्यामा उपयोगी मानिन्छ । त्यस्तै रगत शुद्धिकरणमा पनि यसले सघाउ पुर्‍याउँछ । पुदिना हामी औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गर्छौ । यो बगैंचा, गमला जहाँ पनि रोप्न सकिन्छ । पुदिनाले हावालाई शुद्ध गर्ने पनि बताइन्छ ।
यी त भए हावा शुद्ध गर्ने वनस्पतीहरु । हावा शुद्ध गर्न प्लास्टिक जन्य कुराहरु नजलाएर पुन: प्रयोग गरे झन् राम्रो हुन्छ । हामीले काम नलाग्ने भनी मिल्काइएको सामग्रीहरुलाई फरक साजसज्जामा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । जस्तो कि, गाडी/मोटरसाइकलको टायर ।
कतिको घरमा गाडी होला, कतिको घरमा मोटरसाइकल/स्कुटर । एउटा निश्चित अवधीपछि टायर काम लाग्दैन । टायरमा प्रयोग भएको रबर पुन प्रयोगमा नआउने भएकाले त्यसका कम्पनीहरुले फिर्ता लिदैन । त्यसैले यस्तो टायर फोहोरको रुपमा जम्मा हुन्छ, जसलाईव्यवस्थापन गर्न समेत गाह्रो हुन्छ ।
तर, तपाईले एउटा यस्तो उपायअपनाउन सक्नुहुनेछ,जसले टायर मिल्काउने होइन, सजाउने बस्तुको रुपमा परिवर्तन हुन्छ । खासगरी पुराना टायरलाई तपाईले आफ्नो बगैंचा, करेसाबारीमा सजाउन सकिनेछ । यसलाई सजाउन कुनै गाह्रो छैन । त्यसका लागि टायरमा रंग रोगन गर्न सकिन्छ । टायरलाई रंगीन बनाएपछि त्यसलाई बगैंचामा सुहाउँदो हिसाबले राख्नुपर्छ । त्यसमाथि कुनैपनि किसिमको फूल, बिरुवा रोप्न सकिन्छ । -यादका टुत्रा
२०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार ०१:०१ गते 1 Minute 1779 Views
हरियो सागपात खानुको फाइदै फाइदा जान्नुहोस ।
तपाईको शरीरमा पानीको कमी भएमा यस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
बिहानै खाली पेटमा कागती पानी पिउँनुको यति धेरै फाइदाहरु ।